TAARIIKH NOLOLEED: Waa kuma Musharrax Siciid Cabdullaahi Deni? – Puntlandtimes
TAARIIKH NOLOLEED: Waa kuma Musharrax Siciid Cabdullaahi Deni?
November 21, 2018 W LAASCAANO
GAROOWE(P-TIMES)- Musharax Siciid Cabdullaahi Deni oo kamid ah musharaxiinta u taagan Madaxweyne-nimada Puntland ayaa maalinta berri ah lafilayaa in uu kasoo dago magaalada Boosaaso, waxaana qabanqaabadu ay hadda kasocotaa magaaladaas.
Musharrax Siciid Cabdullaahi Deni wuxuu sannadkii 1966-dii ku dhashay Caasumadda dalka ee Muqdisho, sannaddii 1972dii wuxuu waxbarashada hoose/dhexe ka bilaabay dugsiga hoose/dhexe ee Muqdisho, 1980kii ilaa 1984kii wuxuu dugsiga sare ku qaatay Sheekh Xasan Barsane- Muqdisho halka 1986dii ilaa 1990kii uu Jaamacadda Ummadda ka diyaariyay kulliyadda luuqadaha, 1998 – 2000 Shahaadada labaad ee Jaamacadda ayuu ka qaatay Jaamacadda Putra Malaysia, takhasuska Maamulka (Master of Management).
Waxqabadka Arrimaha Siyaasadda–Heer Puntland
Musharrax Siciid Cabdullaahi Deni kaddib markii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka waxa uu ka mid ahaa indheer-garadkii qayb wayn ka qaatay sidii bulshada Puntland u heli laheyd nidaam Dowladnimo oo waara. Sannadkii 1997, waxa uu kamid ahaa ergadii gobolladii la isku oran jiray Bari (Bari, Gardafuu, Karkaar ), kuwaas oo ahaa ergooyinka laf-dhabarka u ahaa aasaaska Dawladda Puntland
Musharrax Siciid Cabdullah Deni wuxuu noqday Xubin ka tirsan Golaha Baarlamaanka Soomaliyeed Sannadkii 2012, waxa uuna qeyb wayn ka qaatay shaqooyinka barlamaanka isaga oo xubin ka ahaa guddiga Deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ah.
Musharrax Siciid Cabdullaahi Deni wuxuu ka qeyb galay shirar badan oo heer caalami ah iyo kuwo heer Goboleed oo uu ku metelayay dowladda Soomaaliya, sidoo kale wuxuu ka qeyb galay shirar ku saabsan Horumarinta Ganacsiga oo ka dhacay waddamo kala duwan.
Musharax Siciid Deni ma’aha Qurba Joog waa daljoog si wanaagsan ula socda daruufaha hoose ee ay maanta kusugan tahay Puntland.
Musharrax Siciid Cabdullaahi Deni wuxuu January 2019 u sharaxan-yahay xilka Madaxweynaha Dawladda Puntland, isagoo kamid ah musharaxiinta ugu cad cad.